ဒသမနေ့ မှတ်တမ်း (၂.၁၂.၂၀၁၆)
ဒသမနေ့ အစီအစဉ် ( ၂. ၁၂. ၂၀၁၆ )
ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်၊ ဆမီးမြို့နှင့် မတူပီမြို့နယ်၊ လိုင်လင်းပီမြို့အကြားရှိ ဆမီး-လိုင်လင်းပီ ဆက်သွယ်သည့် ကားလမ်းအား နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူဖောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
နောင်မွန်းမြို့နယ်ရှိ ပန်နန်းဒင် – (၁၅)မိုင် – ငါဝါ – (၁၅)မိုင် – ဂဝိုင် – (၁၃)မိုင် – ဒုံဇုံ – (၆)မိုင် – တဆူထု – (၄)မိုင် – ထလာထု – (၅)မိုင် – ခရောင် – (၅)မိုင် – ဒဟွန်းဒမ်း စုစုပေါင်း (၆၃)မိုင်နှင့် ဒုံဇုံ-(၄)မိုင် – (၁၅၀)ပေ ဆန်ခူလောင် ကြိုးတံတား-ထအွန်းဒမ်း – (၃)မိုင် – ဆန်ဒမ်း-(၂)မိုင်-မဒိန်း စုစုပေါင်း (၉)မိုင်ကို ၈ ပေ ဆိုင်ကယ်မြေသားလမ်း ဖောက်လုပ် ပေးရန် ၊ လုံးနတ်ဘူဒဲ-(၁၅)မိုင် – ငါဝါအကြားရှိ (၃၅၀)ပေ မူလ ဆိုင်ကယ် မေခမြစ်ကူးကြိုးတံတားအား ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးရန်နှင့် တဆူထု (၃၅၀)ပေ၊ မေခမြစ်ကူးကြိုးတံတားနှင့် ဒဟွန်းဒမ်း (၃၅၀)ပေ အန္တရာယ်ရှိ ဆိုင်ကယ်မေခမြစ်ကူး ကြိုးတံတား(၂)စင်းအား အဆင့်မြှင့်ပြုပြင်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိတို့ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
သယံဇာတအရင်းအမြစ် တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ပွင့်လင်း မြင်သာမှု ဖော်ဆောင်ရေး EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE (EITI) လုပ်ငန်းအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက် အကောင်အထည် ဖော်မှု အခြေအနေအား သိရှိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါး – မတူပီလမ်းမကြီးမှ ခွဲထွက်သော တိန်ဆီး – တီလပ်-ဝေါ်တီးလမ်းအပိုင်းမှ ဖောက်လုပ်ပြီးခဲ့သော ၂၃မိုင် ၇ဖာလုံ လမ်းပိုင်းမှ ပြိုကျမြေပုံများကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဖြည့်စွက် ရန်ပုံငွေဖြင့် ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးရန်နှင့် ကေလုံ – ဘလေး – လုံငိုး ကျေးရွာအထိ ၁၀ မိုင်အား ဆက်လက်ဖောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
၂၀၁၂ ခုနှစ်က ဧကပေါင်း ၉၆၉ ဧကဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ သည့် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံစက်မှုဇုန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သိရှိလိုသည့်မေးခွန်း
နဝမနေ့ မှတ်တမ်း (၁.၁၂.၂၀၁၆)
နဝမနေ့ အစီအစဉ် ( ၁. ၁၂. ၂၀၁၆ )
ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်း (၆၂) ခု